Tuesday October 13, 2020 - 12:17:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tobanaan qof ayaa ku dhintay dibad baxyo rabshado wata oo ka dhacay wadanka Gini ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
Wararka ka imaanaya dalka Gini ayaa sheegaya in ugu yaraan 90 ruux ay dhinteen boqolaal kalane ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii ciidamada booliska ay toogteen dad dhigayay dibad baxyo loogasoo horjeedo madaxweyne Alpha Conde.
Saraakiisha mucaaradka ayaa xaqiijiyay in dad kabadan 90 qof ayaa lagu dilay mudaaharaad looga soo horjeeday madaxweynaha Gini kaas oo dhowaan qaaday tallaab uu ku raadsanayo in markii saddexaad uu ka qeyb galo doorashooyinka madaxtinimada.
82 jirkaan ayaa doonaya in dib loo doorto 18ka Oktooba kadib markii uu gadaal kasoo riixay dastuur cusub bishii Maarso ee lasoo dhaafay arrinkaas oo dadka naqdiya siyaasadiisa ay sheegayaan in loogu talagalay in looga gudbo xadka labada xilli ee madaxweynaha ku qasbaya in uusan doorasho dambe ka qeyb geli karin.
Afhayeen uhadlay kooxaha mucaaradka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay toogasho aan kala sooc laheyn ugeysteen dadkii dhigayay dibad baxyada, mucaaradka oo magacooda loosoo gaabiyo FNDC ayaa madaxtooyada Gini ku eedeeyay in ay mas'uul ka aheyd wixii dhacay.
Wasiirka Amniga ee dalka Gini ninka lagu magacaabo Albert Damantang Camara ayaa meesha ka saaray in 90 qog ay ku dhinteen rabshdaha isagoo khasaaraha kusoo gaabiyay 42 qof dhimasho ah, "Waxaa jirtay dhimasho rabshado wadata oo aan ka xunahay, waxaana ka shaqeyneynaa inaan hubino in tani aysan mar kale dib udhicin," sidaas waxaa wakaaladda AFP usheegay wasiirka amniga Gini.
Wasiirka ayaa qirtay in isku dhacyada siyaasadeed ay sabab u noqon karaan 42 dhimasho ah laakiin wuxuu sheegay in aysan jirin cadeyn ku filan oo loo nisbeeyo ciidamada amaanka.
Amnesty International warbixin ay daabacday 1-dii Oktoobar, waxay ku eedeysay ciidamada amniga Gini dilka ugu yaraan 50 dibadbaxayaal ah waxayna ku boorisay dowladda in ay la xisaabtanto dambiilayaasha oo katirsan ciidamada ammaanka.
Dalka Ginid ee dhaca galbeedka Afrika waxaa gacanta ku haya melleteriga waana dal dadkiisu ladhibanyihiin Faqri ka dhashay siyaasadda ku dhisan musuq maasuqa iyo kaligii talisnimada.